ပီလီရဲ့ စံခြိနျတှကေို ခြိုးဖို့ မကျဆီက(၁)ဂိုးအလို နဲ့ စီရျောနယျဒိုက (၂)ဂိုးအလို…. – Premier League Special
ပီလီရဲ့ စံခြိနျတှကေို ခြိုးဖို့ မကျဆီက(၁)ဂိုးအလို နဲ့ စီရျောနယျဒိုက (၂)ဂိုးအလို….
မနညေ့က ကစားခဲ့တဲ့ ဗလငျစီယာ အသငျးနဲ့ (၂-၂)သရကေခြဲ့တဲ့ လာလီဂါ ပှဲစဉျမှာ မကျဆီ ဟာ ဘာစီလိုနာအသငျးအတှကျ သှငျးဂိုးတဈဂိုးရယူပေးနိုငျခဲ့ပါတယျ။ ဒီသှငျးဂိုးကွောငျ့ သူဟာ ဘရာဇီးလျဂန်တဝငျကစားသမားကွီး ပီလီရဲ့ ဆနျးတို့ဈ အသငျးမှာ ကစားခဲ့တုနျးက (၆၄၃)ဂိုးသှငျးယူထားတဲ့ စံခြိနျမှတျတမျးနဲ့တူညီသှားခဲ့ပါပွီ။
ဒီဂိုးဟာ ဂရဇျမနျး ကွောငျ့ရရှိခဲ့တဲ့ ပငျနယျတီကို မကျဆီက သှငျးယူခဲ့တာကနစေခဲ့ပါတယျ။
မကျဆီဟာ ပငျနယျတီကို ဘယျခွနေဲ့ ဂိုးသမားရဲ့ ညာဘကျထောငျ့ကို အပွငျးကနျသှငျးခဲ့ပမေယျ့ ဗလငျစီယာဂိုးသမားက ပုတျထုတျကာကှယျလိုကျပါတယျ။
လြှံထှကျလာတဲ့ဘောလုံးကို ၁၈ကိုကျစညျး ထိပျမှာ အသငျးစောငျ့နတေဲ့ အဲလျဗာက အပွေးဝငျရောကျလာခဲ့ပွီး ဂိုးရှမှေ့ာရှိနတေဲ့ မကျဆီ ဆီကို ပိုပေးလိုကျပါတယျ။
ဗလငျစီယာနောကျခံလူ ဂါဘရီရယျက ဖကျြထုတျခဲ့ပမေယျ့ ဘောလုံးဟာ မကျဆီရှိတဲ့ ဘကျကိုသာ ရောကျရှိသှားခဲ့တာကွောငျ့ အသငျ့ရှိနတေဲ့ မကျဆီက ခေါငျးတိုကျသှငျးယူသှားခဲ့ပါတယျ။ မကျဆီ ကလညျး ပီလီ ရဲ့စံခြိနျမှတျတမျးကို လိုကျပွီး တူညီအောငျ ကစားနိုငျခဲ့ပမေယျ့ ပှဲအပွီးမှာတော့ ဘာစီလိုနာအသငျးဟာ ဗလငျစီယာ နဲ့ တဈဖကျနှဈဂိုးစီ သရကေခြဲ့ပါတယျ။
ပီလီ ကလညျး ကလပျတဈသငျးတညျးမှာ ကစားပွီး သူ့ရဲ့ဂိုးသှငျးစံခြိနျနဲ့ တူညီသှားအောငျ စှမျးဆောငျနိုငျခဲ့တဲ့ မကျဆီ ကို ပှဲအပွီးမှာ သူ့ရဲ့ အငျစတာဂရမျ ကနတေဆငျ့ ဂုဏျပွုစကားဆိုခဲ့ပါတယျ။
ပီလီ က “သငျ့ရဲ့ နှလုံးသားမှာ ခဈြခွငျးမတ်ေတာတှနေဲ့ပွညျ့လြှံနတေဲ့အခါ သငျ့ရဲ့လမျးကွောငျးကိုပွောငျးလဲဖို့ဆိုတာခကျခဲပါတယျ။ မငျးလို အသငျးတဈသငျးတဈသငျးရဲ့ အင်ျကြီကို နတေို့ငျးဝတျ ဆငျရတာ ဘယျလောကျတောငျနှဈသကျစရာကောငျးလဲဆိုတာငါနားလညျပါတယျ။ အိမျလိုခံစားရတဲ့နရောထကျပိုကောငျးတာဘယျနရောမှမရှိဘူးဆိုတာကိုလညျး ငါသိပါတယျ။ လီယိုရေ မငျးရဲ့ သမိုငျးဝငျမှတျတမျးအတှကျ ဂုဏျယူပါတယျ။ ဘာစီလိုနာမှာမငျးရဲ့လှပတဲ့အသကျမှေးဝမျးကြောငျးမှုအတှကျပေါ့ ။ ဒီနခေ့တျေဘောလုံးလောကမှာ ငါတို့လို အသငျးတဈသငျးထဲမှာ အောငျမွငျပွီးမွောကျတဲ့ ပုံပွငျ တှဖွေဈလာဖို့နဲ့ အသငျးတဈခုတညျးကိုကွာမွငျ့စှာခဈြမွတျနိုးမယျ့ သူတှဖွေဈဖို့ကတော့ ကံမကောငျးစှာနဲ့ ပိုပွီး ရှားပါးလာပါလိမျ့မယျ။ ငါမငျးကို အရမျးသဘောကတြယျ လီယို” ဆိုပွီး ရေးသားထားပါတယျ။
တဈဖကျမှာလညျး မကျဆီကတော့ ပီလီနဲ့ စံခြိနျတူခဲ့ပွီး၊ နောကျထပျတဈဂိုးသှငျးရငျ စံခြိနျခြိုးပါတော့မယျ။ မကျဆီနညျးတူ စီရျောနယျဒိုကလညျး ပီလီရဲ့ စံခြိနျကိုကြျောဖို့ကွိုးစားနပေါတယျ။ ညတုနျးက စီးရီးအေ ပါမားနဲ့ ပှဲမှာ စီရျောနယျဒိုတဈယောကျ နှဈဂိုးသှငျးယူခဲ့ပါတယျ။ ပီလီရဲ့ သှငျးဂိုး ၇၅၇ ဂိုးကိုမီဖို့ ဒိုလေးတဈယောကျ တဈဂိုးပဲလိုပါတော့တယျ။ နောကျထပျ ၂ဂိုး သှငျးနိုငျရငျတော့ ပီလီရဲ့ စံခြိနျကို စီရျောနယျဒို ကြျောဖွတျနိုငျပါပွီ။ စံခြိနျတှကေို ကြျောဖွတျနတေဲ့ စီရျောနယျဒိုရဲ့ စံခြိနျခြိုး ခရီးစဉျဟာ ဒီမှာတငျရပျတနျ့မသှားခဲ့သေးပဲ စီးရီးအရေဲ့ မှတျတမျးပွတိုကျကိုပါ ဆကျလကျစိနျချေါခဲ့ပါသေးတယျ။
ပါးမားအသငျးနဲ့ အဝေးကှငျးမှာ ဝ-၄ ဆိုတဲ့ ရလဒျနဲ့ အနိုငျရရှိခဲ့တဲ့ ပှဲစဉျမှာ အသငျးအတှကျ စီရျောနယျဒိုဟာ သှငျးဂိုး ၂ဂိုး သှငျးယူခဲ့တာဟာ ဒီ ၂၀၂၀ခုနှဈမှာ သူ့ရဲ့ စီးရီးအေ သှငျးဂိုး ၃၃ဂိုးအထိ ရရှိခဲ့တာဖွဈပွီး ဒီပမာဏဟာ နောကျဆုံး ၅၉နှဈအတှငျး ပွက်ခဒိနျတဈနှဈတာမှာ စီးရီးအသှေငျးဂိုးအမြားဆုံးအဖွဈ မှတျတမျးဝငျသှားခဲ့ပါတယျ။ စီရီးအေ ပွိုငျပှဲတဈလြှောကျ သှငျးဂိုးအမြားဆုံးသူတှဖွေဈတဲ့ ဘိုရယျရဲ့ စံခြိနျကိုမီဖို့ (၈)ဂိုးသာလိုပမေယျ့ ဒီ ၂၀၂၀ ခုနှဈမှာ ကနျဖို့ ဖီအိုရငျတီးနားနဲ့ စီးရီးအပှေဲ တဈပှဲသာကနျြတော့တာကွောငျ့ လိုကျမီဖို့ မဖွဈနိုငျတော့ပါဘူး။ မှတျတမျးတှအေရ ဘိုရယျ(၁၉၃၃၊ ၄၁ဂိုး)၊ ဂနျးနားနျောဒဲလျ(၁၉၅၀၊ ၃၆ဂိုး)နဲ့ လကျရှိဂြူဗငျတပျ အသငျးရဲ့ တိုကျစဈမှူးဟောငျး ဆီဗိုရီ(၁၉၆၁၊ ၃၃ဂိုး)တို့ဖွဈပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ စီရျောနယျဒိုဟာ ဆီဗိုရီနဲ့ ဂြူဗငျတပျ အသငျးမှာ သှငျးဂိုးအမြားဆုံးသူ အဖွဈမှတျတမျးတူနပွေီး မကွာခငျမှာ ဂြူဗငျတပျရဲ့ သှငျးဂိုးမှတျတမျးကို အသဈ ပွနျလညျရေးထိုးနိုငျ တော့မလားဆိုတာ ဆကျလကျစောငျ့ကွညျ့ရမှာလဲဖွဈပါတယျ။
ပီလီရဲ့ စံချိန်တွေကို ချိုးဖို့ မက်ဆီက(၁)ဂိုးအလို နဲ့ စီရော်နယ်ဒိုက (၂)ဂိုးအလို….
မနေ့ညက ကစားခဲ့တဲ့ ဗလင်စီယာ အသင်းနဲ့ (၂-၂)သရေကျခဲ့တဲ့ လာလီဂါ ပွဲစဉ်မှာ မက်ဆီ ဟာ ဘာစီလိုနာအသင်းအတွက် သွင်းဂိုးတစ်ဂိုးရယူပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီသွင်းဂိုးကြောင့် သူဟာ ဘရာဇီးလ်ဂန္တဝင်ကစားသမားကြီး ပီလီရဲ့ ဆန်းတို့စ် အသင်းမှာ ကစားခဲ့တုန်းက (၆၄၃)ဂိုးသွင်းယူထားတဲ့ စံချိန်မှတ်တမ်းနဲ့တူညီသွားခဲ့ပါပြီ။ ဒီဂိုးဟာ ဂရဇ်မန်း ကြောင့်ရရှိခဲ့တဲ့ ပင်နယ်တီကို မက်ဆီက သွင်းယူခဲ့တာကနေစခဲ့ပါတယ်။ မက်ဆီဟာ ပင်နယ်တီကို ဘယ်ခြေနဲ့ ဂိုးသမားရဲ့ ညာဘက်ထောင့်ကို အပြင်းကန်သွင်းခဲ့ပေမယ့် ဗလင်စီယာဂိုးသမားက ပုတ်ထုတ်ကာကွယ်လိုက်ပါတယ်။ လျှံထွက်လာတဲ့ဘောလုံးကို ၁၈ကိုက်စည်း ထိပ်မှာ အသင်းစောင့်နေတဲ့ အဲလ်ဗာက အပြေးဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီး ဂိုးရှေ့မှာရှိနေတဲ့ မက်ဆီ ဆီကို ပိုပေးလိုက်ပါတယ်။ ဗလင်စီယာနောက်ခံလူ ဂါဘရီရယ်က ဖျက်ထုတ်ခဲ့ပေမယ့် ဘောလုံးဟာ မက်ဆီရှိတဲ့ ဘက်ကိုသာ ရောက်ရှိသွားခဲ့တာကြောင့် အသင့်ရှိနေတဲ့ မက်ဆီက ခေါင်းတိုက်သွင်းယူသွားခဲ့ပါတယ်။ မက်ဆီ ကလည်း ပီလီ ရဲ့စံချိန်မှတ်တမ်းကို လိုက်ပြီး တူညီအောင် ကစားနိုင်ခဲ့ပေမယ့် ပွဲအပြီးမှာတော့ ဘာစီလိုနာအသင်းဟာ ဗလင်စီယာ နဲ့ တစ်ဖက်နှစ်ဂိုးစီ သရေကျခဲ့ပါတယ်။ ပီလီ ကလည်း ကလပ်တစ်သင်းတည်းမှာ ကစားပြီး သူ့ရဲ့ဂိုးသွင်းစံချိန်နဲ့ တူညီသွားအောင် စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ မက်ဆီ ကို ပွဲအပြီးမှာ သူ့ရဲ့ အင်စတာဂရမ် ကနေတဆင့် ဂုဏ်ပြုစကားဆိုခဲ့ပါတယ်။
ပီလီ က “သင့်ရဲ့ နှလုံးသားမှာ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေနဲ့ပြည့်လျှံနေတဲ့အခါ သင့်ရဲ့လမ်းကြောင်းကိုပြောင်းလဲဖို့ဆိုတာခက်ခဲပါတယ်။ မင်းလို အသင်းတစ်သင်းတစ်သင်းရဲ့ အင်္ကျီကို နေ့တိုင်းဝတ် ဆင်ရတာ ဘယ်လောက်တောင်နှစ်သက်စရာကောင်းလဲဆိုတာငါနားလည်ပါတယ်။ အိမ်လိုခံစားရတဲ့နေရာထက်ပိုကောင်းတာဘယ်နေရာမှမရှိဘူးဆိုတာကိုလည်း ငါသိပါတယ်။ လီယိုရေ မင်းရဲ့ သမိုင်းဝင်မှတ်တမ်းအတွက် ဂုဏ်ယူပါတယ်။ ဘာစီလိုနာမှာမင်းရဲ့လှပတဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုအတွက်ပေါ့ ။ ဒီနေ့ခေတ်ဘောလုံးလောကမှာ ငါတို့လို အသင်းတစ်သင်းထဲမှာ အောင်မြင်ပြီးမြောက်တဲ့ ပုံပြင် တွေဖြစ်လာဖို့နဲ့ အသင်းတစ်ခုတည်းကိုကြာမြင့်စွာချစ်မြတ်နိုးမယ့် သူတွေဖြစ်ဖို့ကတော့ ကံမကောင်းစွာနဲ့ ပိုပြီး ရှားပါးလာပါလိမ့်မယ်။ ငါမင်းကို အရမ်းသဘောကျတယ် လီယို” ဆိုပြီး ရေးသားထားပါတယ်။
တစ်ဖက်မှာလည်း မက်ဆီက​တော့ ပီလီနဲ့ စံချိန်တူခဲ့ပြီး၊ ​နောက်ထပ်တစ်ဂိုးသွင်းရင် စံချိန်ချိုးပါ​တော့မယ်။ မက်ဆီနည်းတူ စီ​ရော်နယ်ဒိုကလည်း ပီလီရဲ့ စံချိန်ကို​ကျော်ဖို့ကြိုးစား​နေပါတယ်။ ညတုန်းက စီးရီး​အေ ပါမားနဲ့ ပွဲမှာ စီ​ရော်နယ်ဒိုတစ်​ယောက် နှစ်ဂိုးသွင်းယူခဲ့ပါတယ်။ ပီလီရဲ့ သွင်းဂိုး ၇၅၇ ဂိုးကိုမီဖို့ ဒို​​လေးတစ်​ယောက် တစ်ဂိုးပဲလိုပါ​တော့တယ်။ ​နောက်ထပ် ၂ဂိုး သွင်းနိုင်ရင်​တော့ ပီလီရဲ့ စံချိန်ကို စီ​ရော်နယ်ဒို ​ကျော်ဖြတ်နိုင်ပါပြီ။ စံချိန်တွေကို ကျော်ဖြတ်နေတဲ့ စီရော်နယ်ဒိုရဲ့ စံချိန်ချိုး ခရီးစဉ်ဟာ ဒီမှာတင်ရပ်တန့်မသွားခဲ့သေးပဲ စီးရီးအေရဲ့ မှတ်တမ်းပြတိုက်ကိုပါ ဆက်လက်စိန်ခေါ်ခဲ့ပါသေးတယ်။
ပါးမားအသင်းနဲ့ အဝေးကွင်းမှာ ဝ-၄ ဆိုတဲ့ ရလဒ်နဲ့ အနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ ပွဲစဉ်မှာ အသင်းအတွက် စီရော်နယ်ဒိုဟာ သွင်းဂိုး ၂ဂိုး သွင်းယူခဲ့တာဟာ ဒီ ၂၀၂၀ခုနှစ်မှာ သူ့ရဲ့ စီးရီးအေ သွင်းဂိုး ၃၃ဂိုးအထိ ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဒီပမာဏဟာ နောက်ဆုံး ၅၉နှစ်အတွင်း ပြက္ခဒိန်တစ်နှစ်တာမှာ စီးရီးအေသွင်းဂိုးအများဆုံးအဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်သွားခဲ့ပါတယ်။ စီရီးအေ ပြိုင်ပွဲတစ်လျှောက် သွင်းဂိုးအများဆုံးသူတွေဖြစ်တဲ့ ဘိုရယ်ရဲ့ စံချိန်ကိုမီဖို့ (၈)ဂိုးသာလိုပေမယ့် ဒီ ၂၀၂၀ ခုနှစ်မှာ ကန်ဖို့ ဖီအိုရင်တီးနားနဲ့ စီးရီးအေပွဲ တစ်ပွဲသာကျန်တော့တာကြောင့် လိုက်မီဖို့ မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး။ မှတ်တမ်းတွေအရ ဘိုရယ်(၁၉၃၃၊ ၄၁ဂိုး)၊ ဂန်းနားနော်ဒဲလ်(၁၉၅၀၊ ၃၆ဂိုး)နဲ့ လက်ရှိဂျူဗင်တပ် အသင်းရဲ့ တိုက်စစ်မှူးဟောင်း ဆီဗိုရီ(၁၉၆၁၊ ၃၃ဂိုး)တို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် စီရော်နယ်ဒိုဟာ ဆီဗိုရီနဲ့ ဂျူဗင်တပ် အသင်းမှာ သွင်းဂိုးအများဆုံးသူ အဖြစ်မှတ်တမ်းတူနေပြီး မကြာခင်မှာ ဂျူဗင်တပ်ရဲ့ သွင်းဂိုးမှတ်တမ်းကို အသစ် ပြန်လည်ရေးထိုးနိုင် တော့မလားဆိုတာ ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ရမှာလဲဖြစ်ပါတယ်။
ယူနိုကျတကျနဲ့ပှဲမှာ တိုကျစဈအသားပေးနညျးဗြူဟာကို စှနျ့လှတျဖို့ အကွောငျးမရှိဘူးလို့ ဘီယဲလျဆာ ပွော